Izinhlanzi ze-parrot zingabomndeni wama-cichlids, iqembu lama-perciform, zivela eNtshonalanga Afrika, lapho zihlala khona emahlathini ehlathi. Leli gama eliyinqaba le nhlanzi ithola ngenxa yembala yayo enemibala futhi ikhanda eliyigugu, elifana nekhanda le-parrot elikude. Kithina abaningi bakhetha ukugcina emanzini ama-hybrid athola ukuhamba ngezinhlobo ezintathu.
I-Aquarium fish parrots ithandwa kakhulu phakathi kwama-aquarists emhlabeni wonke, kodwa kungakhathaliseki ukuthi bazama kanjani ukuthola inzalo, ayizange isebenze, ngakho ababelethi abavela eSouth-Asia Asia bayaqhubeka nokuzalana ngokuphumelela ngokuzethemba, banikeza lezi zinhlanzi ezinhle ezitolo zezilwane. Isici sabo se-anatomical ngesimo senhloko engejwayelekile-njalo kuvimbela izakhamuzi zasolwandle ukuthi zingadli ngokujwayelekile. Umlomo uvula engxenyeni encane nje kuphela, ngakho-ke inhlanzi ayikwazi ukuthatha ukudla.
Izinhlanzi ze-parrot zidinga amanzi aqukethe, ngoba zidlala kakhulu futhi zihamba phambili. Indlu yabo kumele ibe ngumthamo okungenani amalitha angu-200 nobude buka-0.7 m. Ukulinganisa ukugeleza, kufanele ufake ipompo. Njengoba inhlanzi ivela emazweni afudumele, izinga lokushisa kwamanzi kufanele libe sezingeni lika-24-28 ° С. Njenge-primer, amatshe amakhulu amancane naphakathi asetshenziswa, ubunzima bamanzi kufanele bube phakathi kuka-6.5 - 7.5 pH. I-aeration efaneleko ithinta impilo nempilo yokuphila yezinhlanzi ze-aquarium, ngakho-ke udinga ukukhathazeka ngokuthi amanzi ahlala njalo nge-oxygen.
Izinhlanzi zeParrot zizwela kakhulu emgangathweni wamanzi, ngakho-ke kuyadingeka ukuthatha indawo engama-30% masonto onke. Lezi zinhlobo zinekhono lokunciphisa kancane, ngakho-ke uma i-aquarium ingenangqondo, kufanele ihlanganiswe nesembozo. Ngezansi kuyadingeka ukuthi ubeke ama-snags futhi wakhe amapango, lapho inhlanzi ingafihla khona ngesikhathi sokuzala. Ngenxa yobuningi bayo obunamathele futhi obunokuthula, inhlanzi ye-parrot ivame ukuhambisana nabo bonke abamelayo kanye nabamele "abathulile" abalingana obufanayo. Ukuphila kwe-Aquarium kuthatha ukutholakala kwezinhlobo eziningana endlini eyodwa, futhi ukuze ugweme izimo ezingathandeki kungcono ukungangezi izinhlanzi ezincane kakhulu, ngoba ama-parrot awagwinya ngengozi. Lezi zinyama ziziphatha ngendlela enobungane, kuphela ngesikhathi sokuzala abesilisa abacasula kakhulu, ngakho-ke kufanele baphile ngcono ngokudoba izinhlanzi ezingxenyeni ezingaphezulu zamanzi. Ukuhambisana okuhle kubonakala nge-catfish, barbs, tarakatums, arovan.
I-fish parrot aquarium ayizithobeki ngemuva, ngakho-ke unganika kokubili ukudla okuphilayo nokume. Phakathi neminyaka, umbala wezilinganiso ungashintsha futhi ube mnandi ukuze lokhu kungenzeki, kubalulekile ukunikeza kuphela ukudla okuphezulu okufanelekile lolu hlobo lwezinhlanzi - kufanele luqukathe i-carotene. Inhlanzi akufanele ibe yindlala, ngakho-ke qaphela ukudla kwabo! Uma ngabe kukhona izinguquko ezibonakalayo ekuziphatheni kwe-parrot, sekuye kwaba yisisindo, sisondela eduze, ngakho kufanele itshalwe ngokwahlukana nakwezinye izakhamuzi ze-aquarium. Esikhathini esincane kunesidingo sokwengeza isigamu sezinsuku zonke ze-tablet ye-metronidazole no-0.5 g we-kanamycin. Kungakapheli isonto izinhlanzi zizophola. Ukudla okuhle nokukhwalwa kwekhwalithi kuzokuvumela ukuba ujabulele ukubona lezi zinhlanzi ezihle kakhulu iminyaka engaphezu konyaka.
Izinambuzane eziyingozi kakhulu. I-parade ye-"killers mini"
I-Wildlife yisipho esimangalisayo esingalahlekelwa
IJuniper Lime Shlow: isithombe, incazelo